एकाएक किन घट्यो शेयरबजार, अब के होला ? - Everest Dainik - News from Nepal
साताको पहिलो दिन आइतबार ७९.७४ अकंले ओरालो लागेर नेप्से २४७४.३९ अंकमा आइपुगेको छ ।
किन यस्तो भयो त ? लगानीकर्ता पनि आश्चर्यचकित छन् ।
धेरैजसो लगानीकर्ताले अस्थिर राजनीतिका कारण शेयर बजार ओरालो लाग्न पुग्दै आएको बताएका छन् । निरन्तर उकालो लाग्दै गएको शेयर बजार घटने हो कि भन्ने त्रास पनि छ । त्यस्तो त्रासका कारण बजारबाट नाफा बुक गर्न थाल्दा शेयर बजार ओरालो लागेको भन्ने लगानीकर्ता पनि कमी छैनन् ।
अर्कोतिर लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव हुन थालेको र बैंकबाट शेयर धिताेमा लिएको ऋणको ब्याज बढ्ने हल्ला फैलिएकाले पनि शेयर बजार घटन पुगेको तर्क पनि गरिदै आएको छ । यी र यस्तो हल्लाका कारण शेयर बजार ओरालो लाग्न पुगेको बिश्लेषकको भनाइ छ ।
तर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु भने असोजभन्दा यता तरलताको अभाव नहुने बताउँदै आएका छन् । तर लगानीकर्ता भने तरलतको अभाव हुने र ऋणको ब्याज बढ्ने भन्दै अतालिएर शेयर बिक्री गर्न थालेका छन् । यसले पनि शेयर बजार ओरोलो लाग्न पुगेको ठूला लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
शेयर बजार घटनु पर्ने कारण नै नभएको शेयर बिश्लेषकहरुको भनाइ छ । कोरोना भाइरसको खोप आइसकेको, नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा जाने कर्जालाई नियन्त्रण नगरेको, केन्द्रीय बैंकको शेयर बजारमैत्री नीतिले लगानीकर्तामा उत्साह थपिनु पर्ने हो ।
त्यति हुँदा पनि शेयर बजारमा सुधार हुन सकेन् अखिर किन त ?
नेपाली शेयरबजारका लगानीकर्ता कति बेला खुसीले उफ्रन्छन, कतिबेला तनाबले थचारिन्छन, पत्तै हुँदैन ।
कारण हो- शेयरबजारको प्रवृत्ति ।
शेयर विश्लेषक भन्छन- यहाँको शेयरबजार प्रवृत्ति अन्य मुलुकको भन्दा ठिक उल्टो छ, कतिखेर घट्छ, कतिखेर बढ्छ आँकलनै गर्न सकिन्न ।
सबैभन्दा खतरनाक त हल्लैहल्लामा आकाशबाट पाताल झर्छ,पातालबाट आकाश उक्लन्छ, नेपाली शेयरबजारमूल्य ।
राजनीतिक स्थिति, देशको अर्थतन्त्र र नेप्सेमा सूचीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण विश्लेषणका भरमा आफ्नो लगानीबारे निश्चिन्त रहनु पर्ने र समयमा सही निणर्य लिनुपर्ने लगानीकर्ता हुन्डरीजस्तो प्रवृत्तिले हैरान छन् ।
शेयरबजारमा अनावश्यक हल्ला फिँजाइएकाले ‘अस्वाभाविक’ गिरावट आउने गरेको विज्ञले बताएका छन् । शेयरबजार वास्तविकतामा भन्दा ज्यादा हल्लाको भरमा चलिरहेको पनि शेयर बिश्लेषकहरुको भनाइ छ । खासगरी नयाँ र साना लगानीकर्ता हल्लाका भरमा लगानी गर्ने र निकाल्ने प्रवृत्ति छ । हल्लासँगै बजार नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको कमजोरीका कारण पनि शेयर बजारमा उच्च उतारचढाव आउने गरेको छ ।
नेपाली शेयरबजारको चरित्रै नै फरक भएको बिश्लेषकहरु बताउँछन् । विदेशी मुलुकमा भन्दा विपरीत ढंगले नेपालको शेयरबजार चल्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘संसारले नपत्याउने किसिमले शेयरबजार चल्छ,’ ती बिश्लेषकले भने, ‘विदेशमा त्यो देशको अर्थतन्त्रको सूचक अनुसार बढ्ने र घट्ने गर्छ तर नेपालमा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध नै हुँदैन ।’
अर्थतन्त्र तथा शेयरबजारको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ । तर, अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने संकेत देखिदा पनि शेयरबजार ओरालो लाग्नुको पछाडि नकारात्मक हल्ला नै हो । साना लगानीकर्तालाई हतोत्साहित पार्ने र ठूला लगानीकर्ताले यही मौकामा शेयर खरिद गर्दाको परिणाम हो यो ।
यस्तो अवस्थामा अतालियर शेयर फ्याक्नु पर्ने कुनै कारण नभएको बिश्लेषकहरु बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ पुँजी बजार फोरमका सभापति तथा ठूला लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘पूँजी बजारमा धैर्यता गुमायौं भने सँगै ठूलो धनपनि गुमाउँछौं । गन्तब्य धेरै माथि छ । धैर्य लगानीकर्ता बनौं,’ भन्दै साना लगानीकर्तालाई ढाडस दिन पुगेका छन् ।